Xuska 12-ka April iyo jidadka caasimadda oo xiran | KEYDMEDIA ENGLISH
Xuska 12-ka April iyo jidadka caasimadda oo xiran
MUQDISHO, Soomaaliya - Inta badan waddooyinka muhiimka ah ee caasimadda Muqdisho ayaa xiran saaka, xilli ay maanta ku beegan tahay xuska munaabadda 62 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska Ciidanka Xooga Soomaaliyeed, oo dhidibada loo taagay April 12, 1960-kii, xilligii uu gumeystuhu ka huleelayay Koofurta.
Waxaa la hakiyay isku socodka gaadiidka, meelaha qaarna, waxaa shacabka laga hor istaagayaa in ay lug ku maraan, waxaa la fasaxay goobaha waxbarashada, halka inta badan xarumaha waaweyn ee ganacsiga saaka xiran yihiin, taasoo muujineysa Dowladda Federaalku aysan hoos u fiirin duruufaha adag ee shacabka heysta xilligaan.
Soo jeedintii Mucaaradka ee ahayd, in hantida iyo qarashka lagu bixinayo dabbaal-degga badankeed in loo weeciyo taakulaynta dadka tabaaleysan ee la daalaa dhacaya afur la'aanta bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaan dhag loo dhigin, halka aan waxba laga soo qaadin baaqoodii ku aaddanaa in laga baaqsado xiridda jidadka Caasimadda.
Mucaaradku, waxa ay hore muujiyeen walaac ku aaddan, in Farmaajo doonayo inuu is hor istaag ku sameeyo, dhaarinta Xildhibaannada Baarlamaanka 11-aad ee loo ballansan yahay 14-ka bishan oo ku aaddan khamiista foodda inagu soo heysa, hayeeshee, saraakiil ciidan oo warbaahinta la hadlay waxa ay meesha ka saareen jiritaanka arrinkaas.
Dhamaan Madaxda sare, ayaa Ciidanka Xoogga, ugu hambalyeeyay munaasabaddooda, waxaana la filayaa in Madaxweynihii hore Farmaajo, uu sidii uu caanka ku ahaa, wasaaradda Gashaandhigga ka jeedin doono khudbad marin habaabin ah, oo u jeedkeedu yahay olole doorasho, isagoo sheegan doona shaqo uusan qaban.
Ciidanka Xoogga Dalka waxaa dhidibada loo taagay 12-ki April 1960-kii, kadib wareegto ka soo baxday Ra’iisul Wasarihii ugu horreeyay waddanka AUN, Cabdulahi Ciise Maxamud, waxaana CXDS lagu billaabay Gashaanleyaal iyo Kabtanno, Booliska ka yimid, oo ay ugu horreeyeen General Da’ud Cabdulle Xersi iyo Maxamed Ibraahim Liiqliiqato.
Sidoo kale, Maxamed Siyaad Barre, Maxamed Cali Samatar, Salaad Gabeyre Kadiye, iyo rag kale, ayaa qeyb ka ahaa, horinnadi lagu aas-aasay ciidanka, waxayna si fiican uga qeyb qaateen musaabaddii July 1, 1960-kii, xilligaas oo ay dalka ka dhigeen dabbaaldegyo ku aadan xoriyadda, waana markii ugu horreysay ee shacabka iyo XD is bartaan.